David De Gea Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha Aan Laheyn
Home YURUB IYO YURUB David De Gea Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha Aan Laheyn
LB wuxuu soo bandhigayaa sheeko dhameystiran oo ah goolhaye kubada cagta ee ugu caansan ee loo yaqaan Nickname; 'Edwin Van De Gea'. Dabeecadeena David De Gea Childhood iyo Xogta Aan Loo Baahaneynin Xaqiiqooyinka waxay kuu keeneysaa xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo wakhtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor caan, nolosha qoyska iyo kuwo badan oo OFF iyo ON-Pitch xaqiiqda yar ee la yaqaan ee ku saabsan isaga.
Haa, qof kastaa wuu ogyahay kartidiisa, laakiin qaar ka mid ah tixgelinta David De Gea Biography Story Story taas oo aad u xiiso badan. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, u ogolow.
David De Gea Childhood Story Plus Xogta Warka Xogta:Nolosha Hore
David de Gea Quintana ayaa ku dhashay maalintii 7 ee bishii November ee Madrid, Spain, waxaana u dhashay Jose De Gea, oo ah goolhayihii hore ee goolhayaha ahaa iyo Marivi Quintana oo ah hooyo.
Waxa uu ku dhashay markii waalidkiis uu ku jiray xannaanadii hore ee 40 iyo cunuggiisii ​​oo keliya ee qoyskiisa.
David De Gea waxaa soo kiciyay waalidkiis hodanka ku ah, oo kaliya maaha inuu boobo wiilkiisa, laakiin waxa uu siiyay wax kasta oo uu u baahnaa sida ilmahooda.
David sida cunug yar wuxuu lahaa jacayl weyn oo loogu talagalay isboortiga. Si kastaba ha ahaatee, waalidiintiisa gaar ahaan hooyooyinkood waxay xannaaneeyeen wax badan oo ku saabsan dheelitirka caafimaad ee ka dhexeeya daraasadaha iyo isboortiska Waxay u ogolaadeen inuu bilaabo xirfadiisa kubadda cagta mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee dhalinyarada Isbaanishka ku mahadnaqaya xaalada dhaqaale ee hodanka ah.
David De Gea Childhood Story Plus Xogta Warka Xogta:Shaqo-bilaabid
Waxa uu ku soo bilaabay La Escuela De Futbol Atletico Casarrubuelos - oo ku biiray Atletico Madrid. Cruz, oo ah macalinkiisii ​​hore ee kubada cagta, ayaa mar hore ku dhuftay niyadjab badan oo David De Gea ay jecel yihiin inay ku kalsoonaadaan. Wuxuu yidhi, "Sannad ciyaareed ka dib xirfadiisa ciyaareed, David wuxuu ahaa ciyaaryahan qadar ah oo qadka dhexe ka ciyaara ilaa da'da 14 ka hor inta uusan u dhaqaaqin goolhaye gool ah." Haa, waad heshay !! Ma uusan aheyn goolhaye goolal ah bilowga.
Halkan, wuxuu ahaa 6 oo keliya oo leh timo qafiif ah oo dhalaalaya oo sawir qaadaya kooxda.
David De Gea Sheeko caruureed
David sidoo kale wuxuu u ciyaaray kooxda iskuulka markii loo baahdo. Xiddiga reer Spain ee qadka dhexe ee sawirka hoose ayaa muujiyay tayo wanaagsan isagoo ah ciyaaryahanka khadka dhexe iyo kubada cagta ee da'diisa. Markii loo baahdo, wuxuu awoodaa inuu ciyaaro dhammaan boosaskii (daafaca, khadka dhexe iyo doorka weerarka). David wuxuu sii waday inuu ka ciyaaro qadka dhexe ilaa da'da 14, da'da oo qeexday dhibcaha uu ka ciyaaro mustaqbalkiisa ciyaareed.
David De Gea Sheekada Carruurnimada - Maalmaha Shaqada Hore
Heerka sii kordhaya ee xNUMX ft 6 wuxuu xaddidaa xawaaraha kubada cagta. Isku duuban oo ay la socdaan raadinta adoo raacaya aabihiis aabihiis, David ayaa go'aansaday inuu u bedelo goolhayaha goolka ee nolosha. Dhinaca goolka, David ayaa sidoo kale ka qayb galay kubbadda koleyga oo uu isticmaalay dhererkiisa dheer.
David De Gea- Hal mar oo goolhayaha cusub ee magaalada
De Gea ayaa booskiisa noqday sidii goolhaye buuxa ah oo da'diisu tahay afar iyo toban jir. Waxa uu ka mid ahaa kooxdii ku guuleysatay koobkii ugu badnaa ee dhalinyarada Spain. Kooxda kubada kolayga ee De Gea ayaa lagu sawiray hoos.
Kooxda kubada kolayga ee kooxda De Gea, La Escuela De Futbol Atletico Casarrubuelos.
David De Gea oo ku guuleystay Koobka Kooxaha dhalinyarada
Sida ugu dhaqsiyaha badan ee goolhayaha da 'yarka ah ayaa diyaar u ah inuu ku guuleysto tartamada waaweyn, waxaa lagu weydiiyay inuu ku biiro kooxda koowaad ee Atletico Madrid. Sababtoo ah tayada weyn ee De Gea ayaa saxiixay qandaraas xirfad leh da 'da' 17.
In 2011 David ayaa soo bandhigtay dalab rasmi ah oo ah ciyaaryahan kasta oo tayo leh, oo ku dadaalaya inuu ka fiican yahay, wuxuu filayaa mustaqbalkiisa. Manchester United ayaa noqotay koox cusub oo David ah, waxaana uu saxiixay qandaraas muddo dheer ah. De Gea wuxuu bedelay halyeeygii Edwin van der Sar ka dib markii uu ka fariistay. Qaab ciyaareedkiisa wanaagsan ee kooxda ayaa keentay naane 'Edwin Van De Gea. Inta kale ee ay sheegaan, waa taariikh.
David De Gea Childhood Story Plus Xogta Warka Xogta: Nolosha Qoyska
Qoyska David De Gea waa qiimeeynaya. Guud ahaan, wuxuu ka yimaadaa hoyga goolasha ee goolka guusha. Aabihii, Jose De Gea wuxuu ahaa goolhaye loogu talagalay Getafe oo loo yaqaano kaydkiisa super. Waxa uu ka mid ahaa goolhayihii ugu horeeyay ee loo doortay Getafe intii ay ku jireen xilli ciyaareedkii 1983-84. Aabaha iyo wiilkuba way noolaan jireen waxayna neefsadeen ficilka goolka. Jose, aabihiis, waa macalinkiisa ugu fiican, sababtoo ah waa wax aad u baahan. Atletico, wuxuu ahaa kulan kasta, laakiin sidoo kale tababarka kasta oo tababar ah ee roobka, dabaysha ama barafka.
David De Gea hooyadii, Marivi Quintana waxay aheyd goolhayaha guriga oo dhan nolosheeda. Waxaa lagu xasuustaa inay si fiican u daryeesho ninkeeda iyo wiilka / wiilka keliya. Marivi Quintana waa u doodaha 'isu dheelitir siman oo u dhexeeya waxbarashada iyo isboortiska'. Tani waxay doonaysay wiilkeeda.
Sida muuqata sawirka hoos ku qoran, labada waalidba mar hore ayay ku sugan yihiin 60. Waxay lahaan jireen wiilkooda 40. Labaduba waxay ku nool yihiin Toledo, magaalo iyo degmo ku yaal bartamaha Spain.
David De Gea Taariikhda Qoyska
David mar buu soo xasuustay; "Hooyaday waxay soo wici kartaa laba, saddex, afar jeer toddobaadkii. Marwalba waxay sheegtay in ay aad uga welwelsan tahay aniga. Marwalba waxay ka walwalsan tahay isku dheelitirka udhaxeeya waxbarashada iyo isboortiga. Waalidiintaydu waxay u wadi doonaan 50km maalin uun si ay u ixtiraamaan garoonka tababarka Atletico ee aagga dusha sare ee Alarcon ".
Guud ahaan, taageerada waalidkiis wuxuu u ahaa feejignaan shaqadiisa iyo qofkiisa. Doorka hoggaamintoodu waa mid ka mid ah saaxiibada ugu dhow ee iyaga ogaa.
David De Gea Childhood Story Plus Xogta Warka Xogta:Nolosha Xiriirka
David De Gea waa mid aan is qabin sida wakhtiga qorista. Spanard waxaa la sheegay in uu ku jiro xiriir adag oo muddo dheer ah Edurne García Almagro kuwaas oo ah 5 sano ka weyn isaga.
Edurne, waa fanaan Isbaanish ah, joornaal, iyo soo-jeediyaha TV-ga oo loo yaqaano inuu ka qeyb galo dhageysiga bulsheed tan iyo carruurnimadeeda. Markii ay da'diisu ahayd 9, waxay noqotay xubin ka mid ah kooxda muusikada carruurta ee Isbanishka Trastos. Waxay uusoo foorarsatay dhammaadka 2005 markii ay ka qeybgashay bandhigida Spanish Operación Triunfo waxayna ku dhameysatay kaalinta lixaad ee 2006.
Looma hayo weli, laakiin malaha mustaqbalkooda. Qof kasta oo iyaga ogyahay waxay u arkayaan inay yihiin lab iyo dhedig. David De Gea waligeed kuma qorin gabar kasta oo noloshiisa ka baxsan Edurne. Sida ay sheegtay;
"David iyo anigu aad ayaan u faraxsanahay. Had iyo jeer isaga oo aan isaga u joogin inkastoo uu ku xiran yahay ujeedada ilaalinta ballanqaadyada. Weli wakhti fiican ayuu ii helayaa. "
David De Gea waa sheeko jacayl leh Edurne
David iyo Edurne badanaa waxay yimaadaan xaflado iyo hawlo isboorti oo kala duwan. Xaqiiqdii, haweeney ayaa sheegi karta haddii nin uu jecel yahay inta uu le'eg yahay inuu diyaar u yahay maalgashiga. Wixii David, lacagaha loo isticmaalo Edurne micno ma laha. Waa waqtigii lagu kharash gareeyey.
David De Gea ayaa waqtigeeda tayada leh la sheekeysanaya saaxiibtiis Edurne
Radamel Falcao, Juan Mata, Antoine Griezmann iyo Robert Lewandowski waxay leeyihiin sheeko la mid ah sida David De Gea.
David De Gea Childhood Story Plus Xogta Warka Xogta:Eye Defect
David de Gea wuxuu leeyahay hyperopia, taas oo macnaheedu yahay ereyga dhexdhexaadka ah ee farsamada. Tani waa nooc caadi ah qalad jaban halkaasoo meelaha fog laga arki karo si ka duwan sheyada dhow.
Ciyaaryahanka reer Spain ayaa si qurux badan loo xirxiray muraayadaha adigoo u maraya noloshiisa oo uu xirxiray muraayada la xiriirta
inta lagu jiro ciyaaraha.
David De Gea's Eye Defect- Maxaa loola xiriiraa muraayadaha xiriirka?
Waxqabadka mustaqbalkiisa marnaba ma saameynin xaaladiisa la xaqiijiyay.
David De Gea Childhood Story Plus Xogta Warka Xogta:Agent Super
Jorge Paulo Agostinho Mendes (wuxuu ku dhashay 7 January 1966), oo si fiican loo yaqaan Jorge Mendes waa wakiilka David De Gea.
Wakiilka David De Gea-Jorgie Mendes
Mendes wuxuu ka mid yahay wakiillada kubada cagta ugu saameynta badan adduunka, iyadoo macaamiisha ay ku jiraan Cristiano Ronaldo, David de Gea, Diego Costa, James Rodríguez, Iyo José Mourinho. Mendes waxaa badanaa lagu magacaabaa "super-agent". Waxa uu heystaa 102 ciyaartoyda kale ee macaamiisha ah waxaana ay qabteen qandaraasyo ku eg wadar ahaan $ 1 Billion.
David De Gea Childhood Story Plus Xogta Warka Xogta:Gaarigiisa
David De Gea ayaa kaxeeya Captiva - SUV oo ay soo saartay Chevrolet ($ 50.000)
Si ka duwan Raheem Sterling, looma isticmaalo inuu haysto gawaarida baabuurta, hal maalin maalmaha asbuuca. David waa nin sahlan oo raaxo badan leh Chevrolet Captiva.
David De Gea Childhood Story Plus Xogta Warka Xogta:Gurigiisa
Guriga David De Gea waxaa lagu qiimeeyaa £ 2.75m. Sawirka waxaa lagu muujiyey hoos.
David De Gea Childhood Story Plus Xogta Warka Xogta:Saaxiibkiisa ugu da'da weyn
David saaxiibkiisii ​​ugu da'da weynaa maaha qof kale Kun Aguero.
David De Gea saaxiibkiisii ​​hore ee Kun Aguero
Waxa uu si fiican u qabtay Kun intii lagu jiray waqtigooda Atletico Madrid. Labadaba labadooduba way wadaagaan qolka. Ma aha sababtoo ah iyagu ma awoodaan inay bixiyaan guryo kala duwan, laakiin sababtoo ah saaxiibtinimada dhow ayaa wadaagay.
David De Gea saaxiibkii ugu da'da yaraa
Markaa ka dib marka uu joogo Atletico, Marka David uu soo kiciyo iskutallaabtiisa, dareenkiisa ugu horeeya wuxuu noqon lahaa boodh dhakhso ah ama tuuro si loo dhigo Kun meel ka baxsan mid ka mid ah ciyaartoydiisa ay isku kooxda yihiin.
David De Gea Childhood Story Plus Xogta Warka Xogta:Midabka Timaha
David ayaa sidoo kale loo calaamadiyay timo qurux badan.
Xiddidada oo si buuxda looga xiiray dhinac kasta waa wax aad uwanaagsan taageerayaasha Manchester United oo dhan ku mahadsan David De Gea. Waxa ay u muuqataa inay wax badan ka dhiman tahay ka dib markii Paul Pogba uu yahay taageere Manchester United ah oo hoos ku xusan.
Manchester United Oo Lagu Soo Waramayo Inay Ku Dhaqaaqday David De Gea
Taariikhda Kubadda Cagta Spain
Phil Jones Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography'
Jesse Lingard Storyhood Sheeko Xogta Warka Xogta Lahaa
Fernando Llorente Sheeko dhalasho sheeko xeel dheer